Google Mepu ikozvino inotibvumidza kuti tigadzire uye tigovane nzvimbo dzatinoda kushanyira | IPhone nhau
Ehe, ichokwadi kuti iyo app Mamepu eIOS akavandudzika zvinoshamisa neazvino iOS matsva, asi zvinofanirwa kutaurwa, kune dzimwe sarudzo uye dzakawanda dzinonakidza kwazvo. Uye iwe unofanirwa kuenda kumakwikwi, Hapana munhu anogona kuti Google Mepu chirongwa chisinganyore kusvika kuma greatsMuchokwadi, Google ine hombe dhatabhesi yenzvimbo, uye hombe yekatuni, ndicho chakavanzika cheGoogle Mepu.
Kana iwe uri vashandisi veGoogle Mepu, ini pachangu ndinoshandura pakati peIOS Mepu nemaneja wemukwikwidzi, Google Mepu, ikozvino uchave nenzira nyowani yekuita neapp. Vanosvika all rondedzero yemasaiti aurikuda kushanyira, uye chinhu chinonyanya kufadza ndechekuti tinogona kuagovana iwo….
Chekutanga pane zvese, ndikuudze kuti kuti unakidzwe neaya anodakadza rondedzero yenzvimbo, iwe uchafanirwa kuve neyako Google Mepu app kuti ive yazvino. Naye kare iwe uchave nemukana wekugadzira zvinyorwa zveenzvimbo uye ugozvigovana nevanhu vaunoda. Izvi ndizvo zvatinoudzwa nevakomana paGoogle:
Iwe uri mumwe weavo vane kuwanda kwezvinyorwa mumusoro wako? Iwe unozvipira iwe kunyora akawanda epositi-ayo iwe aunokanganwa pese pese paimba yako? Wakave wakavimbisa email neese iwo iwo anodikanwa nzvimbo dzawakamboenda uye uchida kudzokera kwairi? Google Mepu inogadziridzwa ichikubvumidza iwe kuti ugadzire rondedzero yenzvimbo, kugovana rondedzero neshamwari, uye uteedzere zvinyorwa izvo zvinogadzirwa neshamwari dzako nemhuri. Zvese izvi pasina kusiya Google Mepu yeIOS.
Unofanira chete tinya pazita renzvimbo uye upe nyowani yekuchengetedza bhatani. Ipapo unogona gadzira runyorwa rwevanofarira, kana sarudza runyorwa rwezvimbo dzaunoda kuenda. Chinhu chinonakidza kwazvo pakuronga nzendo dzako, chinhu chakanakisa ndechekuti nekushandisa Google Mepu unogona kuronga nzira dzako kuenda kunzvimbo idzodzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Mepu ikozvino inotibvumidza kuti tigadzire uye tigovane nzvimbo dzatinoda kushanyira
Apple Music "nekure" inodarika mamirioni makumi maviri ekunyoresa